Inona ny paikadinao amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny mpanjifa? | Martech Zone
Inona ny paikadinao amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny mpanjifa?
Talata, Aprily 7, 2009 Alatsinainy 8 Febroary 2016 Douglas Karr
Tamin'ny lahatsoratra maro nolazaiko “Mahazo, mitazona ary mitombo” paikady ho an'ny orinasa hampitombo ny orinasany, saingy lafin-javatra iray heveriko fa tsy mba nanoratako mihitsy ny sitrana mpanjifa. Hatramin'ny naha eo amin'ny sehatry ny rindrambaiko ahy, dia tsy dia hitako loatra ny fiverenan'ny mpanjifa ka tsy nampiditra tetika izahay hanandrana handresy ny mpanjifa. Tsy midika izany fa tsy tokony hatao izany.
Ao amin'ny fihaonambe WebTrends Engage aho ary niresaka momba ny paikady ny tale jeneraly Alex Yoder ary tetikady fahaefatra. Fanambarana WebTrends hanana fiaraha-miasa amin'ny Radian6 manondro paikady matanjaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny - tsy ny fahaizana mihaino fotsiny izay lazain'ny mpanjifa, fa ny onjam-piasa azo ampiasaina mba hametrahana laharam-pahamehana ary hametraka ho laharam-pahamehana ny loharano media sosialy (amin'ny fitaomana)
Miaina amin'ny vidiny mirary sy lafo vidy ary miaina fotoan-tsarotra ny orinasa amin'ny fitantanana mpanjifa marobe izay miparitaka amin'ny mpanelanelana tsy tambo isaina. Ireto rafitra ireto dia fitaovana ilaina amin'ny fifandraisana mahomby amin'ny mpanjifanao, fitantanana ny lazanao ary hahitanao ny vinavinanao.
Raha atao teny hafa, raha atambatra, ireo sehatra dia mamela ny orinasa tsy hijery fotsiny ny lazany amin'ny tena izy, fa koa mamaly avy hatrany ny resaka. Fandresena fandresena ho an'ny mpanjifa sy orinasa… azon'ny mpanjifa araraotina ny tamba-jotra sy ny fifandraisan'izy ireo mba hihainoana azy ireo ny orinasa fa tsy miafina ao ambadiky ny isa 1-800 miaraka amina bitsika tsy misy hatak'andro mba hamily ny mpanjifa tezitra ho lasa hadino.
Mba hitsapana ny fomba fiasa, I Twitter momba ny WebTrends nandritra ny famelabelarana ary ny an'i Jascha Kaykas-Wolff an'ny WebTrends dia nahita ahy teo amin'ny mpihaino nandritra ny Keynote ary naneho ahy ny voalaza tao amin'ny Twitter tao amin'ny iPhone -ny. Cool zavatra! WebTrends koa dia nanambara ny Open Exchange - ny sehatr'izy ireo misokatra manome ny mpanjifa fidirana malalaka amin'ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny API. Araka ny nametrahan'izy ireo azy, "Ny angon-drakitrao, tsy tokony hokaramaina ianao amin'izany!" (Amen!). Nanangana ny tambajotran'izy ireo koa izy ireo.
Ny sasany mety manahy noho ny habetsaky ny angona angonin'ny orinasa momba ny mpanjifany. Alex dia nanonona ny iray amin'ireo orinasa novidiny ary manana singa data mihoatra ny 2,000 momba azy izy ireo. Tsy miahiahy momba ny habetsaky ny orinasa mahalala ahy aho… Mampiahiahy kokoa aho raha mampiasa an'io fampahalalana io na tsia izy ireo na tsia!
Manana paikady fanarenana ho an'ireo mpanjifa efa nijanona ve ianao? Toa olona efa mahalala ny vokatrao, ny orinasanao sns mety ho mpanjifa tsara ny miverina… ary mety ho kely kokoa ny vola lany amin'ny fahazoana mpanjifa vaovao tanteraka. Raha orinasa orinasa ianao dia azonao atao ny mijery ny fampisehoana ny Radian6 ary mijery akaiky kokoa ny anao Analytics fampidirana mba hamaritana raha mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izany.
Tags: alex yoderfanarenana ny mpanjifafitazonana ny mpanjifaJascha Kaykas-Wolffwebtrendsmandresy ny mpanjifa
Any Vegas amin'ity herinandro ity ao amin'ny WebTrends Engage
Fitantanana laza miaraka amin'ny Radian6
Apr 7, 2009 ao amin'ny 3: PM PM
Maniry aho fa ho eo amin'ny hetsika, noho izany misaotra ny famintinana ny teny ifotony ary koa manoratra momba ny fanambarana fiaraha-miasa WebTrends / Radian6.
Tiako ny fomba fijerinao azy satria manolotra orinasa manana fotoana lehibe hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy hihaino tsara kokoa ny mpanjifany, "fa tsy miafina ao ambadiky ny isa 1-800" araka ny filazanao.
Ny orinasa dia manana fotoana hananany tena manokana, hamaly ary hanorina fitoviana eo amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa amin'ny fomba vaovao amin'ny alàlan'ny fihainoana an-tserasera sy ny valiny.
Misaotra betsaka anao niaraka taminay tao Engage. Na dia nibitsika fa maimaika aza ianao, dia tsy mieritreritra zavatra toy izany ny lahatsoratrao.
Nandany ny ankamaroan'ny asako tamin'ny rindrambaiko / marketing ary hiteny aho fa ny paikady fanarenana ny mpanjifa dia zava-dehibe amin'ny fahombiazana maharitra. Na inona na inona vokatra amidinao, ny tena marika mariky ny marika dia ny fomba itondrany ny mpanjifa rehefa misy zavatra tsy mandeha tsara. Marina ho antsika amin'ny rindrambaiko koa izany.
Tao amin'ny lahatsoranao dia nolazainao fa hitako ianao ary nasehoko anao ny bitsika taminao tamin'ny iPhone. Feo mafy izy io, ka tsy azoko ny manazava ny tantara manontolo. Ny nasehoko anao dia fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy izay nalefa tamiko tamin'ny alàlan'ny Fandrefesana ara-tsosialy Webtrends Powered by Radian6. Mampiasa ny fitaovana ao amin'ny ekipako aho anio ary tianay izany; mahatalanjona ny ekipa Radian6 hiara-miasa aminy.
Sendra afaka tonga ihany aho nanao hoe manao hi fa tsy manao nomerika :)